२०७५ बैशाख महिनाको राशिफल यस्तो छ, हेर्नुहोस् !
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ चैत ३० शुक्रबार |
मेष÷Aries (चु.चे.चो.ला.लि.लु.ले.लो.अ.) – मेष राशि हुने व्यक्तिको लागि यो महिना आवश्यकभन्दा बढी दौडधुप पर्ने खालको छ । महादशामा प्रतिकूल दशा चल्नेहरुलाई चोट तथा हृदय रोगको सम्भावना छ । शुरुमा काम बन्ला बन्ला हुने र पछि परिणाम निराशाजनक आउने भइरहेकाले उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्नु उचित हुनेछ । उन्मादी हौंस्याहट बढ्नसक्छ संयम गर्नु पर्ला । तथापि जोशजाँगर एवं पराक्रम बढ्नेनै देखिन्छ । आम्दानी तथा सञ्चित धन भए पनि आर्थिक भार थेग्न गार्हाे नै पर्नसक्ने छ । उद्यम व्यवसाय तथा पेशाको क्षेत्रमा सामान्य मन्दि देखिन सक्छ । पदप्रतिष्ठा तथा स्थानच्युति–स्थानान्तरण र घरडेरा वा वासस्थानसम्बन्धी समस्याले पनि नसताउला भन्न सकिन्न । तपाईको लागि यो महिनामा भगवान सूर्यदेवको साथमा भैरवदेवको श्रद्धाभक्ति तथा दर्शन गर्नु शुभकर हुनेछ ।
वृष÷Taurus (इ.उ.ए.ओ.वा.वि.वु.वे.वो.) – वृष राशि हुने व्यक्तिको लागि यो महिना ग्रहगोचर अल्लि संघर्षकर देखिएको छ । खर्चगर्ने बहानाहरू बढ्ने भएकाले आयले थेग्न मुस्किल पर्नेछ । मनमा भयत्रास सृजना हुने, घरायसी समस्या थपिने, साथीभाई इष्टमित्रसँग पनि वैरभाव हुनसक्ने जस्ता लक्षणहरु प्रतित हुनसक्ने छन् । तथापि मानसिक बल बढाएर समस्यासँग जुध्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्ला । आँटसाहस बढाउने तर उन्माद्लाई संयम गर्ने गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । अपेक्षित उपलब्धि भइहालेन भन्दैमा निराश भने नहुनु होला क्रमशः सुधार आउने लक्षण देखिएको छ । धैर्य गर्नु उचित हुनेछ । तपाईको लागि यो महिनामा सूर्यभगवान र महावीर हनुमानदेवको श्रद्धाभक्ति पूजापाठ एवं दर्शन स्तुति गर्नु शुभदायक हुनेछ ।
मिथुन÷Gemini (का.कि.कु.घ.ङ.छ.के.को.ह.) – मिथुन राशि हुने व्यक्तिको लागि यो महिना आशा र आश्वासन अल्लि बढी हुने र उपलब्धि अपेक्षितभन्दा केही कम हुने खालको देखिएको छ । रपनि संघर्षको बाबजुत कार्यमा सफलता र लाभ मिल्नेछ । आँट साहस भने गर्नपर्ने छ । घमण्ड वा उन्मादलाई संयम गर्न जान्नुपर्ला । महत्त्वपूर्ण रुपमा अपेक्षा गरिएको उपलब्धि एवं आयआम्दानी हुन आफ्नै बुद्धिको कारण अबरोध हुने होकि भन्ने भय छ । विचारपूर्व व्यवहार गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । पेशा तथा घरजग्गा परिवर्तन गर्न ग्रहले उक्साउँदै छ जुन कार्यले पछि पछुतो पार्नसक्ने छ । भौतिक उपलब्धिभन्दा पनि सेवा सत्कार जन्य कार्यमा सफलता मिल्नसक्ने छ । गोचरबाधा निवारणको लागि सिद्धिविनायक श्री गणेश र भगवान श्री हनुमानजीको भक्ति आराधना गर्नु हितप्रद हुनेछ ।
कर्कट÷Cancer (हि.हु.हे.हो.डा.डि.डु.डे.डो.) – कर्कट राशि हुने महानुभावको लागि यो महिना विगतको तुलनामा केहीहद्सम्म उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्छ । तथापि अल्लि महत्त्वपूर्ण काममा शुरुमा बन्नेजस्तो भएर पछि नबन्नपनि सक्नेछ । बोलीको फुर्तिफार्तिलाई भन्दा पनि व्यवहारिकता र आफ्नो अभिष्ट कार्य तथा जिम्मेवारी एवं कर्तव्यलाई बढी ध्यानदिनु पर्ला । क्षणिक रुपमा व्यवसाय तथा पेशागत कामबाट आय–आम्दानी गर्नसकिने छ । मानसम्मान पनि पाउनसकिने छ । समाजसेवा, सांगठानिक कार्य एवं राजनीतिक क्षेत्रमा आवधिक जिम्मेवारी प्राप्त हुनसक्ने छ भने नोकरी आदि पेशाकर्मीको लागि पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा केही सफलता मिल्नेछ । स्वास्थ्यमा शिरसम्बन्धि समस्या, ज्वरप्रकोप, कसैकसैलाई चोटपटक एवं रक्तपित्तविकार आदिसँग सम्बन्धित समस्या नआउला भन्न सकिन्न । अबरोधलाई कम गर्न सात्त्विक आहारपूर्वक भगवान श्री भैरवदेव र माँ बगलामुखीको दर्शन भक्ति एवं स्तुति उपाशना गर्नु मनासिव हुनेछ ।
सिंह÷Leo (म.मि.मु.मे.मो.ट.टि.टु.टे) – सिंह राशि हुने व्यक्तिको लागि यो महिना केही सुधारात्मक देखिएको छ । मुख्य ठानिएको तथा बढी आसक्ति गरेको कार्यमा सफलता पाउन अल्लि कठिन परेपनि अन्य काममा भने अनुकूलता रहनेछ । क्षणिक एवं छोटोसमयमा हुने व्यवहारिक एवम् व्यवसायिक काममा प्रगति गर्नसकिने छ । कसैकसैलाई धार्मिक एवम् आस्थाको धरोहर, इष्टदेव–गुरुजन आदिप्रति पनि श्रद्धाको भावमा ह्रास आउन सक्ने सम्भावनालाई भने नकार्न सकिन्न । मनोन्मादले मानसिक विचलन हुनसक्ने खतरा पनि त्यतिकै छ । आत्मसंयमताको आवश्यकता देखिन्छ । विद्यार्थीहरुले मेहनत बढाउन प्रयत्न गर्नु पर्नेछ । यात्राको सम्भावना छ । केही अबरोधको बाबजुत सामाजिक मानमर्यादा बढ्ने, राजनीतिक तथा प्रतिनिधित्त्वकारक क्षेत्रमा जिम्मेवारी थपिने सम्भावना छ । शारीरिक स्फुर्ति बढ्नेछ । भगवान श्री हनुमान एवं सूर्यदेव र गुरुगणपतिको स्तुति आराधना गर्नाले ग्रहबाधा एवं अड्चनलाई कम गर्न मद्दत मिल्नेछ ।
कन्या÷Virgo (टो.प.पी.पु.ष.ण.ठ.पे.पो.) – कन्या राशिको लागि यो महिना संघर्ष एवं स्वास्थ्यमा समस्या आउने खालको देखिएको । आरोह अवरोहप्रद र कामकार्यमा अबरोध तथा विश्वासघातको सामना गर्नपर्ने छ । तथापि विनामेहनत लाभ हुने केही कामबाट आयआम्दानी हुनेछ । तर कैफियतयुक्त आम्दानीप्रति आसक्ति नगरेकै राम्रो हुनेछ । असफल गराउन मानमर्दन तथा षड्यन्त्र गर्नेहरू सल्बलाउने भएकाले सजग हुन जरुरी छ । आकस्मिक यात्राको सम्भावना छ । केही जटिलताको सामना गर्ने तयारी अवस्थामा रहनु उचित होला । तपाई आफैलाई र मान्यजनको कष्टलाई पनि ग्रहले संकेत गरिरहेको छ । आयभन्दा व्यय बढी हुनखोज्ने भएकोले सावधानीपूर्वक अर्थव्यवहार गर्नुहोला । सञ्चित धनराशि पनि खर्च हुनसक्ने तर्फ समेत ग्रहले संकेत गरिरहेको छ । भगवान सूर्यनारायण, संकटमोचन हनुमानदेव, विघ्नविनाशक श्री गणपति र भैरवदेवको श्रद्धाभक्ति गर्नुले संकट निवारणमा मद्दत हुनेछ ।
तुला÷Libra (रा.री.रु.रे.रो.त.ति.तु.ते.) – तुला राशि हुनेहरुको लागि यो महिना केहीहद्सम्म उपलब्धि मुलक देखिएको छ । रपनि केही बढी महत्त्व दिएको काममा रोकावट आउनसक्ने छ । कोही परिवारिक सदस्य टाढिनसक्ने सम्भावना छ । पेशा तथा व्यवसायको क्षेत्रबाट आर्थिक लाभ गर्नसकिने छ । कैफियुक्त धनार्जनतर्फ पनि मन आकर्षित हुने हो कि भन्ने भयलाई भने नकार्न सकिन्न । साथै आस्थाको केन्द्रप्रति शंका एवं सन्देहको भावना आउने हो कि भन्ने देखिन्छ । राजनीति, समाजसेवा एवं संस्थागत क्षेत्रमा शर्तमा लचकता अप्नाएर अघि बढ्नु उचित हुनेछ । केही अड्चन तथा प्रतिकूलताको बाबजुत पनि आकस्मिक रूपमा यात्रा हुनसक्ने छ । तथापि ज्वरो आदिको कारण स्वास्थ्य समस्या आइपर्नसक्ने छ । अपखबर, कार्यमा विघ्नबाधा आदिको पनि सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । स्वजन कष्टको संभावना देखिएको छ । ग्रहबाधालाई कमि गर्न यो महिना तपाईँको लागि भगवान सूर्यनारायण र भैरवदेवको साथमा माँ बगलामुखीको श्रद्धा भक्ति एवं उपाशना आराधना गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
वृश्चिक÷Scorpio (तो.ना.नि.नु.ने.नो.य.यी.यु.) – बृश्चिक राशि हुने व्यक्तिको लागि यो महिना विगतको तुलनामा सुधार भएर आएको मान्न सकिन्छ । तथापि व्यक्तित्त्व एवं कर्मक्षेत्रको प्रतिष्ठा बचाउन संघर्ष गर्नुपर्ने छ । प्रत्यक्षाप्रत्यक्षमा आलोचना गर्नेहरु बढ्नेछन् । कूलवंशको ईज्जत जोगाउने, पारिवारिक समझदारीलाई कायम राख्ने लगायतका यावत पक्षमा सावधानी अप्नाउनु पर्ने देखिएको छ । केही ग्रह प्रतिकूल अवस्थामा गोचरमा विराजमान भएकाले विभिन्न समस्याले दुःख दिनसक्ने छन् । विशेष गरी महिनाको पूर्वार्धमा आर्थिक भार बढ्ने तथा सञ्चित धनले अपुग हुने हुनसक्ने छ । नातागोतासँगको सम्बन्धमा तुषारो लाग्नसक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । प्रतिद्वन्दि तथा विरोधीहरूका नजरमा क्षणिक रुपमा आफ्नो वचस्व स्थापित गर्न सकिए पनि त्यो दीर्घ नहुनसक्ने छ । तथापि एकाग्रताका साथमा आफ्नो कार्यमा तल्लिन हुनाले केहीहदसम्म उपलब्धि गर्न सक्नुहुनेछ । व्यापार एवं व्यवसाय तथा यात्रा आदिबाट परिणाम सुखद आउनेछ । यो महिना तपाईले भगवान श्री महावीर हनुमानदेव र विघ्नहर्ता श्री गणेशजीको उपाशना साधना गर्नाले प्रतिकूल ग्रहको दुष्परिणामलाई कम गर्न मद्दत हुनेछ ।
धनु÷Sagittarious (ये.यो.भ.भि.भु.ध.फ.ढ.भे.) – धन राशि हुनेहरुको लागि यो महिना सुधार भएर आएको देखिन्छ । रपनि केही पक्षमा निकै सावधानी अप्नाउनु पनि पर्नेछ । घमण्डलाई संयम गर्नुपर्ने छ भने यात्रादि र कामकार्य तथा आहारविहारमा सावधानी अप्नाउनु पर्ने छ । चोटपटक तथा रोगविमार आदिको सम्भावना देखिएकोले ख्याल गर्नु जरुरी देखिन्छ । पठनपाठनमा बढी ध्यान दिनसकेमा मात्रै विद्यार्थीले उपलब्धि हातपार्न सकिएला । नीतिगत तथा वाणीगत दोष खेप्न नपर्ला भन्न पनि सकिन्न । उन्माद, तनाब, बढ्नसक्ने छ, सात्त्विक आचरणको अभ्यास जरुरी हुनेछ । मान्यजनमा कष्ट पर्नसक्ने भय देखिएको छ । मान्छेहरूस“ग ख्यालख्यालमै झगडा हुनसक्ने र सन्तानपक्षबाट चिन्ता बढ्नसक्ने कुरालाई पनि नकार्न सकिन्न । दाम्पत्य तथा प्रेमसम्बन्धमा षड्यन्त्रवाजी नहोला भन्न सकिन्न । महिनाको अन्त्यबाट भने थोरैमात्रामा उपलब्धि लिनसकिएला । जागिर, पेशा, व्यवसाय आदिमा सुधार हुने तथा सकारात्मक प्रभाव देखिन थाल्नेछ । प्रतिकूल ग्रहगोचरको निवारणार्थ सूर्यनारायणको साथमा भगवान हनुमानदेव र गणपतिको भक्तिभाव बढाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।
मकर÷Capricorn (भो.ज.जी.जु.जे.जो.ख.खि.खु.खे.खो.ग.गी.) – मकर राशिको लागि यो महिना बढी महत्त्व दिएको काममा बढी संघर्षकर देखिएको छ र पनि उपलब्धिमूलक रहनेछ । केही आन्तरिक मान–मर्यादामा आ“च आउने, पारिवारिक समस्या थपिने, व्यवहारिक कमजोरी खोज्नेहरु बढ्ने तथा कामकार्यमा साविकको भन्दा बढी मेहनत गर्नुपर्ने हुनसक्नेछ । प्रतिष्ठामा आँच जस्तो परेपनि अन्तिमको परिणाम अनुकूल पनि हुनसक्ने छ । आँटसाहस बढेरै जाने देखिन्छ । विरोधीको प्रतिकार गर्न सकिनेछ । बोलीव्यवहारमा पनि अल्लि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । भविष्यको लागि राम्रो धनार्जन गर्ने कार्यप्रति मनको लगाव बढ्नसक्ने देखिरहेको छ । आफन्तिजनबाट विश्वासघात जस्तो परेपनि क्रमशः परिस्थितिमा परिवर्तन आई सुधारको वातावरण बन्नेछ । अन्तिममा पुगेर अल्झिने विशेष कामकार्यको लागि तपाईँले सूर्यभगवानको साथमा भगवान श्री गणपति एवं हनुमानदेव र माँ बगलामुखीको स्तुति उपाशना तथा भक्तिभाव गर्नु शुभदायक हुनेछ ।
कुम्भ÷Aquarius (गु.गे.गो.स.सी.सु.से.सो.द.) – कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि यो महिना सुधार भएको मान्न सकिन्छ । शारीरिक जोशजा“गर बढेर आउने, कामकार्यमा मन लाग्ने र सफलता हात पार्नसकिने छ । इष्टमित्रको पनि सहयोग प्राप्त हुनेछ । रपनि मानसिक रुपमा अल्लि घमण्ड बढ्ने तथा चोटपटक आदिलाई पनि नकार्न नसकिने गोचरग्रहको स्थिति छ ख्याल गर्नुपर्ला । व्यापार–व्यवसायमा सुधार आउने, धनार्जन हुने, पुरुषार्थ गर्न सकिने छ । शत्रु पाखा लाग्ने र रोकिएर रहेको काममा सफलता मिल्ने समय भएको हुनाले स्वकार्यमा समय दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । विद्यार्थीहरुले अध्ययनमा अल्लि लगाव बढाउन सके विशेष उपलब्धि प्राप्त गर्नसकिने छ । आहारमा सुधार ल्याई मस्तिष्किय शक्ति बढाउनु उचित हुनेछ । यो महिनामा हुन खोजेर पनि अन्तिममा रोकिने काममा सफलताको लागि तपाईले श्री भैरवदेवको स्तुति उपाशनालाई महत्त्व दिनु उपयुक्त हुनेछ ।
मीन÷Pisces (दी.दु.थ.झ.ञ.दे.दो.च.ची.) – मीनराशि हुनेहरुको लागि यो महिना केही तनाबी रहनेछ । एकातर्फ सञ्चित धनको खर्च हुनसक्ने छ भने अर्कोतर्फबाट आम्दानी सामान्य रहने छ । मनविचारमा तामसि मानसिकताको प्रवलताले एकाधिकार जमाउने सम्भावना देखिन्छ । यो राशि हुने कोही–कोहीलाई पित्त एवं वायूप्रकोप बढ्नसक्ने र मुत्ररोग आदि स्वास्थ्य समस्याले सताउन सक्नेछ । स्वास्थ्यमा आएको समस्यालाई हेल्चेक्राई भने नगर्नुहोला । स्वास्थ्यजन्य समस्या घरपरिवार तथा जीवन साथी एवं प्रेमीतर्फ पनि असर गर्नसक्ने छ । आहारविहारमा सावधानी अप्नाउनु उचित हुनेछ । बोलेका कुराले सास्ति दिनसक्ने भएकाले बोल्दा ख्यालपुर्याउन जरुरी हुनेछ । यो महिना तपाईँलाई भगवान सूर्यदेव, संकटमोचन महावीर हनुमान, विघ्नहर्ता श्रीगणेश र शत्रुहर्ता माँ बगलामुखीको उपाशना गर्नु र विद्वान गुरुजनको आर्शिवाद लिनु शुभदायक हुनेछ ।